Feo Iray Avy Any Ambava-adin’ny El Niño Ao Kenya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2016 3:45 GMT
Vakio amin'ny teny नेपाली, Español, English
Ao Isiolo, faritra karankaina sy maina ao Kenya, nisy rafitra vaovao napetraka hitarihana rano mba hanampiana ireo vondrom-piarahamonina hianatra sy hanaiky fomba vaovao ary hahita fomba hafa ho entina miompy mba ho fidirambola hafa ho azy ireo, hanatratrarany ny fahavitantena ara-tsakafo sy hiatrehany ny haintany miverimberina.
Ao anatin'ity andiany ahitàna fizarana roa ity, mizara ny tolona ataon-dry zareo sy ny fanantenany ireo feo tanora avy ao Kenya, raha narahan'ny orambatravatra tsy mahazatra ilay haintany nandravarava ny Tandrok'i Afrika, ao anaty tontolo iray izay mafàna kokoa noho izay fotoana rehetra voasoratry ny tantara..
Ny fijoroana vavolombelona ato anatin'ity andiany ity dia nangonin'ny Climate Impacts Program ao amin'ny 350.org, fikambanana iray manorina hetsika momba ny toetrandro manerantany, ary averina avoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna vontoaty.
Ny ampahany voalohany dia nosoratan'i Kay Seven, mpanakanto mpiantsehatra avy ao amin'ny Faripiadidian'i Kajiado, tsy lavitra ny sisintany Tanzaniana.
Firenena iray mora iharan'ny haintany i Kenya, indrindra fa noho ny toetaniny sy ny firafitry ny tontolo ao aminy. Ny filatsaky ny rotsakorana, indrindra fa ny tsy fisian'ny ranonorana na ny fiovaovan'ny rotsakorana dia matetika antony mahatonga loza voajanahary, izay tolona mitohy atrehan'ireo asa fivelomana eny ambanivohitra ny fampifanarahana azy amin'ny zavamisy.
Na dia tsy any amin'ny ampahany avaratra-atsinanana aza, fa matetika tena iharan'ny haintany sy ny tondradrano, tamin'ity taona ity ny Faripiadidian'i Kajiado dia nijaly tamin'ny rotsakorana ambonin'izay nahazatra nateraky ny tranga El Niño. Taorian'ireo toedraharaha henjana nateraky ny haintany, nanomboka niaina rotsakorana ny distrika misy anay. Niaraka taminà rotsakorana nivatravatra, andrandrainay mba hitombo tsara ny vokatray. Kanefa, manahy ihany izahay hoe mety hiteraka fahavoazana handravarava ny vokatra ny rotsakorana be loatra.
Farìtan'i Kay Seven, mpanakanto mpisehatra avy ao amin'ny Faripiadidian'i Kajiado, tsy lavitra ny sisintany Tanzaniana, ny sasany amin'ireo fiantraikan'ny haintany mitarazoka ao amin'ny vondrom-piarahamoniny. Sary : Kay Seven
Tamin'ny taona lasa, ny departemanta mpamantatra toetrandro ao Kenya dia nampitandrina fa betsaka amin'ireo faritra any amin'ity firenena ao atsinanan'i Afrika ity no mety hahita rotsakorana ambony noho ny mahazatra ateraky ny tranga El Niño mandritry ny fotoanan'ny orana Oktobra hatramin'ny Desambra. Hiteraka fahavoazana ho an'ireo faritra mora tratry ny tondradrano sy ny lemaka amorontsiraka ny orambe mivatravatra, saingy amin'ny lafiny iray dia hanampy an'ireo tany fambolena karankaina sy ireo vondrom-piarahamonin'ny mpiompy any andrefan'ny firenena.
Ireo Afrikana Tatsinanana sy ny ampahany betsaka amin'ireo vondrom-piarahamonina manerana ny Tandrok'i Afrika no efa mijaly amin'ity taona ity noho ny orambe mivatravatra sy ny haintany, izay ambaran'ireo manampahaizana manokana fa mety mifandray amin'ny fivoaran'ny El Niño. Mandritra izany foana izany, namono olona ampolony tao avaratra-andrefan'i Tanzania ny tondradrano, ary namela anjatony maro tsy hanana hialofana. Namono biby fiompy sy nanimba voly katsaka ary landihazo ihany koa ilay teotrandro henjana.
Mbola an-dàlam-piarenana avy amin'ireo trangan'ny El Niño teo aloha ireo vondrom-piarahamonina sasany ao Kenya, Etiopia, Sodàna Atsimo, Tanzania sy Somalia; indrindra fa ilay iray tamin'ny 1997-1998 izay namoizana olona notombanana ho nahatratra 2.000 sy nitondra nankaminà fiparitahan'aretina ho an'ny biby, niely tany rehetra tany. Efa nasian'ny haintany mafy ihany koa ny Tandrok'i Afrika tamin'ny 2011-2012, izay niteraka tsy fanjarian-tsakafo henjana nandrahona ny fiveloman'ireo olona maherin'ny 10 tapitrisa. Olona notombanana ho 260.000 teo ho eo, ankizy ny antsasany amin'izany, no maty noho ny hanoanana tao Somalia, iray tamin'ireo faritra tena voa mafy indrindra.
Ao anatin'ny faritra iray izay tsy tapaka niharan'ny vokatry ny tranganà toetrandro henjana, ary niaina matetika ny El Niño, dia tena tsy maintsy ataon'ireo mponina any ny miezaka ho tsara fiomanana mba hampitomboana ny fahafahan-dry zareo miatrika izany. Resaka fitazonana aina io ho an'ny 80% amin'ny vahoaka izay vondrom-piarahamonina ahitàna tantsaha sy mpiompy, manana fidirambola miankina betsaka amin'ny fahamarinan-toerana na tsia eo amin'ny firindran'ny toetrandro.
“Namoy aina tanora isika noho ny aretina pesta, ny tsy fanjariantsakafo sy ny hanoanana. Mihatandindonin-doza ny fiahiana ara-tsakafo eo amintsika satria tena voadona mafy ny toekarentsika. Ny ratsy indrindra, niteraka fifandonana miverimberina eo amin'ireo tantsaha sy ny mpiompy ireo vanim-potoana lavabe isian'ny haintany, miady mba ho tompon'izay loharanonkarena zara raha misy.” -Tononkira avy amin'ny hiran'i Kay Seven
Tao anatin'ny fotoan-tsarotra, nitondra andianà tetikady samihafa ny governemanta tao an-toerana mba hampihenana ny fiantraikan'ny haintany sy hanohanana ireo vondrom-piarahamonina tena voa mafy. Tao anatin'ireny tetikady ireny ny fandaharanasa fametrahana fitahirizana sakafo manerana ny firenena, ny fananganana vondrona madinika antsoina hoe Sacco (rafitra iray ahafahan'ireo tantsaha mahazo fampianarana sy fiofànana momba ny fambolena), ireo fandaharanasa momba ny fitarihana rano ami'ny fomba maoderina sy ny fambolena hazo.
Na mbola tsy nitondra vokatra azo tsapain-tànana aza ireny ezaka ireny, tsy very fanantenana ireo vondrom-piarahamonina. Inoan'izy ireo ny asa sy ny firaisankina avy eny ifotony mba hiatrehana ny loza voajanahary tahaka izany sy hananganana vondrom-piarahamonina matanjaka ary afaka miatrika tsara, afaka miantoka ny fiahiana ara-tsakafo ho an'ny rehetra ka hamerina fiainana anaty tontolo iainana iray lavitry ny haintany sy ny hanoanana. Na dia goavana be aza ilay fanamby, vonona ny vondrom-piarahamonina ao hiditra amin'ny famokarana angovo azo havaozina sy hanohitra ny fivoaran'ny angovo azo amin'ny solika fandrehitra, no sady hanamafy ny fiomanany amin'ny loza. Ao anatin'ny tononkira amin'ny hirako iray:
Manana andraikitra isika hiantoka amin'ny hoavy ny hanànan'izay mbola any am-bohoka sahady toerana mendrika handaniany ny androm-piainany rehefa teraka izy. Azontsika atao ny miantoka ny hihenan'ny taham-pahafatesana ateraky ny hanoanana, tondradrano na izay loza hafa ateraky ny toetrandro, amin'ny fandraisantsika andraikitra eny anivon'ny vondrom-piarahamonintsika. Ndeha hifanome tànana, Ndeha ho ataontsika io…vitantsika io raha mifanome tànana isika.
Mwenda tezi na Omo,Marejeo ni Ghamani [amin'ny fiteny Swahili, midika hoe ‘Afaka mandositra araka izay tratrantsika hiala ny olana isika, saingy tsy maintsy hiverina foana isika satria tsy nanokana fotoana hamahàna azy ireny’].